အမည်ခံထေရ၀ါဒမှ တကယ့်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » အမည်ခံထေရ၀ါဒမှ တကယ့်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသို့
Posted by realman on Sep 14, 2011 in Buddhism, Critic | 22 comments
သင်္ဂါယနာတင်တယ်ဆိုတာ – – – – –
(အဓမ္မ၀ါဒဖော်ထုတ်ရေး ဖိတ်ခေါ်စာမူပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ စာမူ (post) ဖြစ်ပါသည်။)
ဘာသာတရားဆိုတာ ဓါတ်ခွဲခန်းအဖြေ မဟုတ်ပါ။ သုတေသနစာတမ်း မဟုတ်ပါ။ လူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံညွှန်း အတိုင်းအတာ အချင်အတွယ် စည်းမျဉ်းနည်းလမ်းများကို လိုက်နာလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်အပ်ပါ။ အဲဒီလိုမျှော်လင့်သူဟာ မည်သည့်ဘာသာတရားကိုမျှ သေသေချာချာ ယုံကြည်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာသာမဲ့ဖြစ်ပါမည်။ သို့မဟုတ် သူ့စဉ်းစားဥာဏ် သူ့သိမြင်နိုင်သလောက်ကိုသာ မှန်သည်ထင်သော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုးကွယ်သူသာဖြစ်ပါမည်။ (ဤစကားသည် အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော ဟူသော စကားရပ်နှင့် ဘာမျှမဆိုင်ပါ)။ ဤသို့ဖြစ်လျှင်လဲ ၄င်းကို အပြစ်ဆိုရန်မရှိပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ကြတာပေါ့…..။
ဘာသာတရားဟူသည် လူတစုစီ၏ ယုံကြည်မှု့သာဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းယုံကြည်မှု့များကို ပူးပေါင်း၍၄င်း ညှိနှိုင်း၍၄င်း ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဆုံးဖြတ်လျှက် အများဆန္ဒရယူပြဌာန်းအပ်သော အများဆန္ဒအရ ပြုပြင်တည်းဖြတ်ရသော ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါ။ တဦးစီကပင်လျှင် ကိုယ်ကြိုက်သလို ယုံကြည်နိုင်တာပါ။
ယနေ့မှာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ဂိုဏ်းပေါင်း အယူပေါင်းများစွာ ကွဲပြားလျှက် ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကွဲပစေပေါ့။ အဲဒါက ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်တာပဲ။ မဖြစ်တတ်တာတွေ ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်အစု ဘယ်ဂိုဏ်း ဘယ်ဝါဒ အထဲပါချင်သလဲ။ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရုံပါပဲ။ သူ့ဟာသူဖြစ်နေတဲ့ အစုတခု(ဥပမာ-မြန်မာပြည်၏ထေရ၀ါဒ) ကို ကိုယ့်သဘောနဲ့မတိုက်ဆိုင်လျှင်
ဒီအယူဝါဒကိုမကြိုက်ဘူး ဒီအယူဝါဒဟာမမှန်ဘူး ဟုပြောလိုက ပြောနိုင်ပါပေ၏။
ဒို့အယူကဒီမှာမှားတယ်၊ ဒို့အယူက ဒီမှာလွဲတယ်၊ ဒို့အယူကို ဒီလိုပြင်ရမယ်လို့ ပြောလျှင်တော့ အဲဒါစည်းကျော်သွားပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရင်းခံ ဘုရားဟောအစစ်ဆိုတာ သက်သေပြစရာ ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာ အသံသွင်းထားတာမရှိပါ။
တကယ်တော့ အရှင်အာနန္ဒာ ပြန်ပြော/ပြန်ဟော/ပြန်ရွတ်ဆိုပြတာတွေဟာတောင် ဘုရားနှုတ်ထွက် လုံးစေ့ပတ်စေ့ ဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါ။ ဘုရား ၄၅ ၀ါလုံးဟောသမျှ အတိအကျ ပြန်ပြောရင် သင်္ဂါယနာတင်တာ ၄၅ နှစ်ပြန်ကြာမှာပေါ့။ တကယ်တော့ ဒါ့ထက်တောင်ပိုကြာမှာပေါ့။ အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်ကြီးက သူမှတ်မိတာကို သူနားလည်တဲ့အတိုင်း အတိုချုပ် ပြန်ပြောပြတာကနေ ပထမသင်္ဂါယနာမူ ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ အဲဒါ နှစ် နှစ်ထောင့်ငါးရာကြာပြီးမှ မူပေါင်း အရာအထောင်ကွဲပြီးမှ ဘယ်ဟာဘုရားဟောဖြစ်တယ် လို့ အပေါ်စီးကမပြောထိုက်ပါ။ ဘယ်ဟာဒို့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားဟော – လို့ပဲ ပြောထိုက်တာပါ။ ကြိုက်တဲ့အစုက ကြိုက်သလိုယုံကြတဲ့အခါ သူတို့ယုံကြည်တဲ့ ဘုရားဟောအသီးသီး ရှိပါလိမ့်မယ်။
ထေရ၀ါဒဆိုရာမှာ မြန်မာပြည်ကလက်ခံတာရယ် အခြားထေရ၀ါဒလေးနိုင်ငံက လက်ခံတာရယ် ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထဲကွဲနေတယ်ထင်ကြပါသလား။ အခြားထေရ၀ါဒလေးနိုင်ငံက လက်ခံတာဟာ အညီအညွတ် တမူထဲလို့များ ထင်ကြပါသလား။ ကျုပ်တော့ (ဖတ်ဘူးကြားဘူးတာကိုထားလို့) ထင်တာတခုထဲပြောရရင်တောင် –
ထေရ၀ါဒနိုင်ငံအသီးသီးမှာကို အယူအမျိုးမျိုး မူအမျိုးမျိုး ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒရဲ့ ဇတ်လိုက်ကျော် သီရိလင်္ကာကို ရောက်ဘူး လေ့လာဘူးသူများ ၀င်ပြောသင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ သင်္ဂါယနာ ၂ကြိမ်ပါ ကျမ်းစာများကိုစီစစ်ခြင်း၊ ဝေဖန်သန့်စင်ခြင်းများကို ရဟန်းပညာရှိလူပညာရှိများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကြသည်မှာ များလှပါပြီ။ ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရားလုပ်ပြီး “ဗုဒ္ဓဓမ္မအစစ်က အဲဒါတွေမဟုတ်ဘူး ငါပြောမယ့်ဟာတွေကွ” လို့ ပြောဆိုရေးသားကြတာ မတွေ့ဘူးသေးပါကြောင်း။
ဘာဖြစ်ချင်ကြလို့ ဘာကိုပြောနေကြတာလဲ။ သူ့ဂိုဏ်း၊ ကိုယ့်ဂိုဏ်း၊ သူ့ဘုရား၊ ကိုယ့်ဘုရားဆိုပြီး
ဘာဖြစ်လို့ ဘုရားလုနေကြတာပါလိမ့်နော်။ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိရှိသမျှဘုရားတွေကိုပယ်လိုက်ကြရ
အောင်။ လူကိုဗဟိုပြုတဲ့ လူ့ငြိမ်းချမ်းရေး အတွေးအမြင်တွေကိုပဲ ဖော်ထုတ်တာကိုလုပ်ကြဖို့ကောင်းပြီ။
အမှန်တော့ koyoရေ ဘုရားတွေကို မျှော်စင်ကျွန်းပို့ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစေတာက ကောင်းမယ် ထင်တယ်ဗျ။
အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့..တရုတ်တွေက.. မှတ်တမ်းတင်တတ်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်တာမို့.. သူတို့စာတွေကိုးကားနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်မိပါတယ်..။
ပညာရှင်ဆန်စွာ.. အစွဲမကပ်ပဲ.. အထောက်အထားကျမ်းကိုး.. (ရနိုင်သလောက်) ပြသ..ညွှန်းဆို..ရေးစေလိုပါကြောင်း..။
အထောက်အထားကျမ်ကိုး ကိုးမှပညာရှင်ဆန်သလား။ မကိုးရင်ပညာရှင်မဆန်တော့ဘူးလား။ တဆိတ်လောက်မေးပါရစေ။ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမ ပညာရှင်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုပေါ့။ ကျမ်းကိုးကျမ်ကားပြုတိုင်းပညာရှင်ဆန်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသေလူဖြစ်ဝါဒါနုဝါဒကို နိုင်ငံ တော်သံဃာ့မဟာနာယကက ဆုံးဖြတ်တုန်းက ကျမ်ကိုးကျမ်ကား တွေအဖြစ် ပါဠိတော်တွေ သမိုင်းအထောက်အထားတွေပြကြပေမယ့် ဘယ်သူ ကမှ ပညာရှင်လို့ မသတ်မှတ်တဲ့အပြင် ကြောက်စရာလန့်စရာအဖြစ်တောင် ထင်လိုက်ကြပါသေး ရောလား။ သူ့တပည့်တွေကပဲ လက်ခံနိုင်ကြတာမဟုတ်လား။ တကယ်တော့ လုပ်နေ ပြောနေ ပြုနေတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ လူတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျတယ်လို့ လူတွေသုံးသပ်နိုင်အောင် ပြောတာတွေဟာ လူအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရင် ဘာကျမ်းကိုးမှ မလိုသလို ဘာဘုရားမှလည်း သက်သေလိုက်ခိုင်းဖို့မလိုပါဘူး။ ဒီအတိုင်းတာဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးသာ ပျက်သွားမယ် ကျမ်းကိုးလို့မဆုံး ဖြစ်နေတော့ မပေါ့ဗျာ။
ကျေးဇူးပါပဲ kai ။ post လေးနေမှာစိုးလို့ ကျမ်းတွေ မကိုးတော့တာပါ။ ကျမ်းတွေကပြောမှ လက်ခံတာထက် ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာ ကိုယ်တိုင် ဝေဖန်မိနိုင်ကြဖို့နဲ့ တစ်ဖတ်သတ်ပြောဆို ရေးသားကြတာတွေနဲ့တင် တင်းတိမ်မနေပဲ အသိဥာဏ်တွေနိုးကြားလာစေဖို့ကိုပဲ အဓိကရည်ရွယ်တာပါ။
ပဉ္စမ နဲ့ ဆဌမ သင်္ဂါယနာကို မယုံကြည်ပါက စတုတ္ထသင်္ဂါယနာ ပါဠိတော်-အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်များ အင်တာနက်တွင် အကုန်ရှိပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို နားလည်ပါက တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အဖြူအမဲ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထား ကွဲလွဲနေမှု လုံးဝ မတွေ့ရပါ။ တွေ့ရှိပါက မြန်မာလိုနှင့် အင်္ဂလိပ်လို ယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးပါ။
ပညာလွန်တော့ ကောက်ကျစ်သည်။ (ပညာလွန် = too much knowledge)
Without honesty, Without right understanding. (Sayadaw U Jotica)
ရိုးသားမှုသည် အမှန်တရားကို သိနားလည်ဖို့ အတွက် အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်သည်။
ပါဠိတော်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာနဲ့ မြန်မာလိုရေးတာပဲကွာတာပါ ။ အားလုံးကတော့ အတူတူနဲ့ အနူနူပါပဲ။ ဘာတဲ့ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီး ဆိုတာလိုမျိုးပါပဲ။ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဘုန်း တော်ကြီးတွေ ရဟန်းနဲ့ ဒကာမ အတူတကွဆက်ဆံပေါင်းသင်းမေထုန်မှီဝဲမိလို့ စစ်ဆေးတဲ့အခါကြတော့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်က ထွက်တဲ့ သွေးကို(ရာသီသွေး) အညစ်အကြေးလို့သုံးမိရေးမိလို့ အညစ်အကြေးဟာသွေးမဟုတ်ဘူး သွေးဟာလည်း အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးငြင်းကြခုန်ကြ ဖြစ်ကြသတဲ့။ အဲသလောက် အတာလို့ပြောရင် နာဦးမယ်။ ဒီတော့ ပါဠိတော်ကိုဘယ်ဘာသာနဲ့ရေးရေး ရေးချင်သလိုရေး တင်ခဲ့ပြီးတဲ့ သင်္ဂါယနာ အတိုင်းဆိုရင်တော့ မြင့်မိုရ်တောင်ရှာသလိုမျိုး ယုန်ကိုချိုရှာသလိုမျိုး လိပ်ကိုအမွေးရှာသလိုမျိုး ပုဇွန်ကိုမှသွေးရှာသလိုမျိုး ချေးကိုတတောင့်ထွာလည်းဖြစ်ရမယ် အခေါင်းလည်းပွာရမယ် ဆိုတာမျိုးလို ဖြစ်နေတော့မပေါ့ဗျာ။ ဟား …ဟား…ဟား။
စာပေအထောက်အထား သမိုင်းအထောက်အထားတွေ ဘယ်လောက်ကိုးကိုးပါ ……
အဲဒီ သမိုင်းအထောက်အထားတွေကကော ဘယ်လောက်ခိုင်မာလို့လဲ … ဘယ်လောက် တိကျမှာလဲ …
သမိုင်းဆိုတာ အမှန်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို အမှားလဲ မဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူး ….
realman က ကိုယ်ထောက်ပြတဲ့သမိုင်းမှ အမှန်လို့ တထစ်ချမဖြစ်စေချင်ပါဘူး …
ဘယ်ဘာသာ ဘယ်ဝါဒမဆို အားလုံးမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ အယူအဆပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ် …
အားလုံး တူညီအောင် တသားတည်း လုပ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး …
ကွဲပြားပါစေ … ဒါသဘာဝပါ … အဲဒီ မတူကွဲပြားတာကတည်းက တူညီတာ တစ်ခုပါစမြဲပါ …
အဲဒါ ကိလေသာငြိမ်းမှုကို ဦးတည်နေတာပါပဲ …. ဦးတည်ရာကို သွားတဲ့လမ်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုး
ရှိစမြဲမို့ တမျိုးတည်းဖြစ်စေခြင်းဟာ မိုက်မဲရာကြပါတယ် …. သမိုင်းအထောက်အထားတို့ အတွေးအခေါ် လေးနဲ့တော့ ကိုယ်တင်ပြတာ အမှန်လို့တစ်ထစ်ချ မသုံးသပ်စေချင်ပါဘူး …
အသိနဲ့ အကျင့် တစ်ထပ်တည်းကျလာရင် ကိလေသာပါးမှု ကုန်မှုဟာ ဖြစ်လာစမြဲပါပဲ …
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး … မဟာစည်ဆရာတော်တို့ ဟောတဲ့တရားမှာ ကိလေသာငြိမ်းမှုကိုသာ
စောင်းပေးထားတာ …. ပွားစည်းကြောင်းတွေ မပါပါဘူး …. အနတ္တပါတယ် …. သစ္စာပါတယ် …. ဒါလိုရင်း အချုပ်ပဲလေ … သမုတိသစ္စာ ပရမတ္ထသစ္စာ အရိယာသစ္စာ ဆိုပြီး အားလုံးကို ကွဲကွဲပြားပြား သိစေတာပါပဲ … ထေရ၀ါဒမှာက အစကတည်းက အရိယာသစ္စာ ရှိပြီးသားပါ … ပရမတ္ထတစ်ခုတည်း ကျင့်သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး … ပရမတ္ထက အရိယာသစ္စာကို သိမြင်ရေး အခြေခံပါပဲ ….
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ ထေရ၀ါဒပရမတ္ထသစ္စာ အစွဲစွပ်စွဲချက်ကို စွန့်မှသာ ထေရ၀ါဒ အနှစ်အသားကို သိမြင် နိုင်မှာပါ … မိုးကုတ်ဆရာတော် မဟာစည်ဆရာတော် စသည့် ထူးခြားသည့်ဆရာတော်အပေါင်း ဟာ အရိယာသစ္စာပေါက်ပြီးသူများဖြစ်ကြောင်း ပရမတ္ထသက်သက်ဝါဒီတွေ မဟုတ်ကြောင်း သင်သဘော ပေါက်လာပါလိမ့်မယ် …
Realone ခင်ဗျာ သမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြဖို့အတွက်ကရေးကြီးပါတယ်။ ပရမတ္တသစ္စာတွေလေ့လာတိုင်းသာ တရားပေါက်ရမယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယက ဆာဒူးတွေ ဟာရဟန္တာတွေဖြစ်နေကြမှာပေါ့။ သူတို့လည်းဒီပရမတ်တွေ လုပ်နေကြတာပဲ။ ဒီပရမတ်သစ္စာ သာ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားပဲဆိုရင် ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီပရမတ်တရားတွေက ဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကတည်းရှိနေပြီးသာပဲ။ ဗုဒ္ဓက ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို အခြေခံပြီး အရိယသစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓရဲ့အရိယသစ္စာလေးပါးကို ပရမတ်တွေနဲ့ ရောမချလိုက်ပါနဲ့လို့ သုတေသီပညာရှင်တွေက ပြောနေကြတာဖြစ်မှာပါ။။ ထပ်ပြီး သမိုင်းဆရာတစ်ချို့ကလည်း ဒီပရမတ်သဘောကို ဇောင်းပေးတဲ့ တရားတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကို ဟိန္ဒူတို့၊ ဂျိန်းတို့ဆီကနေ နောက်မှ ၀င်လာတာလို့ သုံးသပ်ကြတာပေါ့။ ( မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး … မဟာစည်ဆရာတော်တို့ ဟောတဲ့တရားမှာ ကိလေသာငြိမ်းမှုကိုသာ
စောင်းပေးထားတာ ) ဆိုတော့ အိန္ဒိယက ဆာဒူးတွေလည်း ကိလေသာပွားဖို့ လုပ်နေတယ်များထင်နေသလား။ သူတို့လည်း ကိလေသာငြိမ်းဖို့ လုပ်နေကြတာပဲ။ နှိုင်းယှဉ်ကြပါ။ ကိလေသာဆိုတာဘာဟာလဲ၊ ဘယ်ကို ရှုမှကိလေသာငြ်ိမ်းမှာလည်း၊ အဲဒါ post တစ်ခု ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။ အဲဒီကျမှ စိတ်ဝင်စားရင် အကျယ်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ ဘာဟာမှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာထက် နှိုင်ယှဉ်လေ့လာပြီး ဘာဟာဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ စာအုပ်တွေမှာ လမ်းမဆုံးပဲ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဝေဖန်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။
ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ရာဥာဏ်မမီပေမယ့်။တတ်နိုင်သလောက်တော့ စောင့်ဖတ်ပေါ့မယ်။ဘယ်လို ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါတယ်။များများရေးပေးပါ။
ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ လူသားတွေအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့၊ မည်သူမဆို ကျင့်သုံးလို့ရတဲ့ လူ့ငြိမ်းအေးမှု လမ်းစဉ်တွေပဲ။ ဗုဒ္ဓမရှိတော့တဲ့နောက် အစွဲကြီးတဲ့ တပည့်တစ်ချို့က ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ဓမ္မ(ပညာရပ်)တွေကို အပိုင်သိမ်းပြီး ကိုးကွယ်၊ ယုံကြည်ရမယ့် ဘာသာအဆင့်အတန်းရောက်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်ကြတော့ တကယ့် အဖိုးတန်အသိပညာရပ်တွေဟာ နတ်ကိုးကွယ်မှုသာသာလောက်ဖြစ်သွားတာ။ ဒါဟာ realman ရေးသလို အစွန်းရောက်ဘာသာရေးသမားတွေရဲ့လက်ချက်ပဲ။ ဘာသာရေးပုံစံဖြစ်သွားတော့ ပြောတာကို ယုံရမယ်ဆိုပြီး ဘာမှ မစိစစ်ရဲတော့ဘူး။ မယုံရင် ငရဲကြီးမှာဆိုတော့ ကြောက်ကြတာပေါ့။ တကယ်တော့ ဘာသာရေးပုံစံတွေဟာ လူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်တွေကို ပိတ်နေစေပါတယ်။ ကဲ ရင်နင့်ရေ ဘာသာရေးပုံစံတွေကနေ ကျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ မကောင်းလား။
သိပ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့လူငယ်တွေထဲမှာ ဒီလိုဘာသာရေးနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး
တိတိကျကျပြောနေသူတွေပေါ်လာတာကို Welcome ပါ။
မှားချင်လဲမှားမယ် ၊ မှန်ချင်လဲမှန်မယ်။ဒါက ကိုယ့်အမြင်ကို တင်ပြတာပဲ စောင့်ဖတ်မယ်ဗျာ။
ယုံတဲ့သူက ချင့်ယုံပေါ့။စဉ်းစားပေါ့။ ကျုပ်တို့လူမျိုးက တရားတော်နဲ့ပါတ်သတ်လာရင်
ဆက်မတွေးရဲတော့ဘူး ။ အရင်ဟာတွေမှန်တယ်ပဲပြောကြတာ ။ဒါက ဘာသာရေးလေ။တွေးရမှာ ။
ရင်နင့်ပြောတာလေးကို သတိပြုနော်။ လွတ်လပ်စွာပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာ သိပ်တန်ဖိုးရှိတယ်။
ကြိုက်တယ်ရင်နင့်ရေ ။ အမြင်တွေကို လွပ်လပ်မှန်ကန်စွာဖွင့်ချပါ။
ရဲဘော် ဆက်လုပ် ။ Good Idea For ထေရ၀ါဒ ။
ဧဟိပဿိကော၊ သြပါနေရိကော..တဲ့။ လေ့လာကြည့်ကြပါ။ ငါပြောတာကိုမယုံနဲ့ …ကျင့်လှည့်ကြံလှည့်လောတဲ့…ဒါကဂေါတမရဲ့ ဆိုခဲ့တဲ့စကား…သုတ္တာန်လာစကားမို့ ရှင်ကဿဖ လက်ထက် ပဌမသဃာင်္ယနာ ကစပြီးမူးပြောင်းမယ်မထင်ပါဘူး။ ရှေးရိုးစဉ်လာမိရိုးဖလာဗုဒ္ဓအယူ တွေကလည်း အလွဲကြီးလွဲနေကြတဲ့ ကိစ္စတွေအများကြီးရောပြွန်းနေပါတယ်။
သဃာင်္ယနာတင်ကြသူတွေအဆက်ဆက်က ရာဇ၀င်ဆရာတွေနဲ့ မခြားပါဘူး။ ဘယ်သူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြသလဲ၊ ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးကြသလဲ။ အဲ့ဒီအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ တင်ခဲ့သမျှ သဃာင်္ယနာတွေက ကိုယ်ပရိဿတ်နဲ့ကိုယ့်ဇာတ်ဆရာနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာမို့…flawless မဟုတ်တာတော့သေခြာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ scholars တွေကိုရောပါဝင်ခွင့်ပြုသလား။………… မထင်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မမူစဉ်က အယူလွဲတာက တစ်မျိုး ( သူဘုရားငါဘုရား )
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူပြီး ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်(တရား)ကို ယုံကြည်သူ မယုံကြည်သူ တစ်မျိုး
မြတ်စွာဘုရားရှင် လွန်တော်မူပြီး ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ကိုမယုံကြည်သူ တစ်မျိုး (ဒါက အလွတ်ဖြစ်သွားပြီ)
မြတ်စွာဘုရားရှင် လွန်တော်မူပြီး ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်(တရား)ကိုယုံကြည်သူတွေမှာ
ထို တရားတော်ကို ကွဲလွဲနေကြ သည်က တစ်မျိုး
ဒါက အခု ခင်ဗျားတို့ဖြစ်အင်
လိုင်းကွဲသွားတဲ့ မယုံကြည်သူတွေ ကိုတော့ မပြောလိုတော့ပါဘူး
ယုံကြည်တယ် သို့သော် ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတရားတော်ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး ဒီလိုငြင်းခုန်ကြတယ်
သေခြာတာကတော့ ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်တာခြင်းတူတယ် ဒီလိုလား ကျုပ်ကို လာဝါးမပြနဲ့
ဘယ်သော မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူသော တရားတော်ကို လက္ခံလို့
ခင်ဗျားတို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ကို ယုံကြည်ကြတာလည်း
မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ကို လုံးလုံးမယုံသေးဘူး လေ့လာနေတာ ဒီလိုလား
ဘုမသိဘမသိ ဘုရားထိဓါးကြည့် အဲ့သည်သတ္တဝါတွေ နားထား
ကျုပ် အထူးဆိုလိုတာက ဘယ်ဟာက မြတ်စွာဘုရားဟော တရားဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အသာထား
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်သော မြတ်စွာဘုရားဟောသောတရားတော်ကို ယုံကြည်ပြီး
ဒီထည်းမှာ ဟိုကျမ်းကိုးဒီကျမ်းကိုးနဲ့ နောက်ဆုံး မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံဘူးလို့လိုင်းပြောင်းနေသလိုလို
ကျမ်းကိုပြိုင်နေကြသလို ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ ကျုပ်ကထင်တာဘဲ
ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ကို ကျုပ်ကပြတ်ပြတ်သားသားမေးနေတာ
ခုခင်ဗျားတို့က ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ တရားဘက်ကနေ ဖြေရှင်းနေတာလား
ဒါမှမဟုတ် ကာလမသုတ်တော်ကြီးကို ဘန်းပြပြီးလုပ်နေကြတာလား
သို့မဟုတ် မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရုတ္တိမရှိဘူး ဒီလိုလား
ခင်ဗျားတို့တွေ တော်တော်လေး အခန်းကျော်နေသလားဘဲ
ထမင်းစာလို့ စားပြီးတဲ့ခါတိုင်း စားပြီးတော့လည်း ဘာမှမဟုတ်ပါလား
ရေငတ်လို့သောက်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း သောက်ပြီးတော့လည်း ဘာမှမဟုတ်ပါလား
ရွှေငွေ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရပြီးတော့လည်း ဘာဖြစ်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး
တစ်လောကလုံးငါ့ဥစ္စာလို့စိတ်ကူးကြည့် ငါ့ဥစ္စာတွေ ဖြစ်သွားတော့ ဘာဖြစ်လည်း
ထားပါတော့ ဟိုကောင်မလေး ချောတယ်လှတယ် ဘာပြုခြင်တယ်ညာပြုခြင်တယ်
ပြုပြီးတော့ရော ဘာဖြစ်သေးလည်း ဘာမှမဟုတ်ဘူး
ဒီနေရာမှာ တစ်ခါပြီးတစ်ခါ တစ်ဖန်ပြန်လိုခြင်နေတဲ့ သဘောလေးကိုသွားတွေ့တယ်
တစ်ကယ်ရပြီးတဲ့အခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး အဲ့သည်ဘာမှမဟုတ်တာကိုဘဲ တစ်ခါပြန်ကြိုးစားကြ
သြော် ……မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဘဝဆိုတာ ဒုက္ခဘဲလို့ ဒါ့ကြောင့်ဟောခဲ့တာဘဲ
ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်တို့ကို ရှိခိုးပါ၏
ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားသော တရားတော်တို့ကို လက်ခံယုံကြည်ကျင့်ကျံကုန်သော
ဒါက ကျုပ်ယုံကြည်ချိန်လေးမှာ မနည်းကြိုးစားပြီးရှိခိုးရတာ
မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကို မသိထားရင် ခုနေကျုပ် သမ္မတကြီးဖြစ်လောက်တယ်
ထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်၏ တရားတော်ကို စာတွေကိုဖတ်လိုက်ယုံနဲ့ နားလည်နိုင်ခဲတယ်
ဒါကတော့ ကျုပ်ဘဝရဲ့ ကိလေသာ လိုအင်ဆန္ဒတေတိုင်းဟာ ဘာမှမထူးဘူး ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာ
ထိုမြတ်စွာဘုရား ဟောတဲ့တရားတော်နဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ယုံကြည်မှုဘဲ
ကျုပ် ထိုမြတ်စွာဘုရားကို ယုံကြည်တာနဲ့ ကျုပ် အရက်မူးတာဘာမှမဆိုင်ဘူး
ဒီတော့ကာ ဘယ်တရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှ ဘာကိုငြင်းနေကြတာလည်း
ကိုပုရယ် ဒီလောက်သိပြီးတော့များ ၆နေရသေးတယ်။
ကျနော်တော့ဟိုးအရင်မဆွရှေးကထဲက ကိုပု ခြောက် တယ်လို မထင်ဘူး
ကို အောင်ဘု ရေးထားတယ်
“““ ဘယ်သော မြတ်စွာဘုရားဟောသောတရားတော်ကို ယုံကြည်ပြီး
ကျမ်းကိုပြိုင်နေကြသလို ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ ကျုပ်ကထင်တာဘဲ ”””
ဘုရားဟောတာက ရှင်းရှင်းလေး …. ဘယ်တရားကို မဆို လေ့လာကြည့် ကျင့်သုံးကြည့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အကျိုးတရား ရတယ်ဆိုရင် ဆက်လုပ်
အကျိုးတရား မရဘူးဆိုရင် ဆက်မလုပ်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို ဟောထားတယ်
ဘယ်တရားက ဘုရားဟော … ဘယ်တရားက ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူး ငြင်းစရာ မလိုဘူး
လိုက်လုပ်ကြည့် ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုရင် ဆက်လုပ် ကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုရင် မလုပ်နဲ့
လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လဲ တခြား မလေ့လာနဲ့ဦး
၃၈ ဖြာ မင်္ဂလာ ရှိတယ် ။ ဘုရားဟော ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ နောက်ထား
မြန်မာလို လေ့လာကြည့် လိုက်လုပ်ကြည့် ကောင်းကျိုးရ၏ မရ၏ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိလာလိမ့်မယ်…။
ဒီဘ၀မှာကို အေးချမ်းအောင် နေနည်းတွေ မင်္ဂလသုတ် (၃၈ဖြာ) မင်္ဂလာ ထဲမှာ အကုန်ရှိတယ်…
ပါဠိတွေ ၊ အဌကထာတွေ ၊ ၀ိနည်းတွေ ၊ အဘိဓမ္မာတွေ ဝေးသေးတယ် နောက်ထား
မင်္ဂလသုတ်တစ်ခုထဲကို ဟောခဲ့တာနဲ့တင် ကျွန်တော် ဘုရားကို ယုံကြည်တယ်။
မင်္ဂလာသုတ်ကို ကျွန်တော်သိအောင် ပြန်ဟောခဲ့တာ တစ်ခုတဲနဲ့တင် ကျွန်တော် သံဃာတော်တွေကို ကိုးကွယ်တယ်။
ကိုအောင်ပုရေးထားတဲ့…..”ခုခင်ဗျားတို့က ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ တရားဘက်ကနေ ဖြေရှင်းနေတာလား
သို့မဟုတ် မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရုတ္တိမရှိဘူး ဒီလိုလား”…နဲ့
နောက်တခါ..True Answer ရဲ့…
“ရိုးသားမှုသည် အမှန်တရားကို သိနားလည်ဖို့ အတွက် အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်သည်”….သဘောကျ.လက်ခံပါသည်။ွှ
Real man အနေနဲ့ ထေရ၀ါဒရဲ့အားနည်းချက်ကိုေ၇းပြသလို.ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကအတိုင်း.တကယ့်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုလဲကျေလည်အောင်
realman ရေးမှပဲ ဘာသာရေး သမိုင်းလိမ်လည်မှုတွေ သိရတော့တယ်။ မြန်မာထေရ၀ါဒတွေက ပဉ္စမသင်္ဂါယနာမှာ ဘုရားဟောတွေကို ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်နိုင်တယ်လို့ လုံးထွေးသိနေကြတာ။ အခုတော့ လူလည် တွေ(အဲလေ – – – ရဟန်းလည်တွေ)လုပ်ပြီး ကိုယ်ရေးချင်တာတွေ ကျောက်စာအရင် ထွင်းခိုင်ပြီးမှ ဘုန်ကြီးတွေ ခေါ်ရွက်ခိုင်းတာဆိုတော့ ဒါလား သင်္ဂါယနာ။ ကျောက်စာပေါ်ရှိပြီးသားတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ ပုံနှိပ်တာလောက်ကို တိုင်းပြည်မျက်နှာမှမထောက် (ထိုအချိန်က ဒီထက်အရေးကြီးတာများရှိနေသည်။) ရေးကြီးခွင်ကျယ်နဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျများစွာ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ လုပ်တာရော ဖြစ်သင့်ရဲ့လား၊ တော်ပြီးဗျာ ဆက်မရေးချင်တောဘူး။ ကြာရင် မကောင်းတော့ဘူး။ သိနေတာကိုး။ အကျဉ်းအကျယ်နေရာလွဲနေကြတယ်လို့ စာရေးဆရာဦးအောင်သင်းပြောသလို ကျယ်ရမှာက မျက်စိ၊ မျက်စိက မကျယ်ပဲ ဟိုဒင်းကြီးက ကျယ်နေတယ် ဆိုသလိုပဲ။